Turkiga oo tijaabiyay gantaalaha S-400 ee Russia
Turkiga ayaa Jimcihii hawada u ganay gantaal meel u dhow xeebta Badda Madow ee Turkiga halkaas oo la filayay in militariga ay ku tijaabiyaan nidaamkooda difaaca S-400 ee Ruushka uu sameeyay, sida ku cad muuqaal maxalli ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters.
Mareykanka ayaa ku cambaareeyay Turkiga tijaabinta nidaamka aadka u hormarsan ee difaaca cirka ee Ruushka, iyadoo Turkey uu iska indhatiray digniinta Mareykanka.
Telefishinka Haber oo aad ugu dhow dowladda Turkiga ayaa soo wariyay in ciidanka Turkiga ay sameeyeen tijaabada nidaamka S-400 taasi oo lagu qabtay waqooyiga gobolka Sinop ee badda madow.
Af-hayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka Morgan Ortagus ayaa sheegtay in Mareykanku uu u muujiyey saraakiisha ugu sarreeya ee dowladda Turkiga in soo iibsashada nidaamyada milatari ee Ruushka sida S-400 ay tahay wax aan la aqbali karin, waxayna intaas ku dartay in Washington ay caddeysay rajjada ay ka qabto in nidaamkan gantaaluhu uusan hawlgalin.
“Haddii la xaqiijiyo, waxaan erayada ugu adag ku cambaareynaynaa tijaabada gantaalka S-400 oo ah mid aan la jaan qaadi karin masuuliyadaha Turkiga ee ka mid ahaanshaha xulafada NATO iyo saaxiibka istiraatiijiga ah ee Mareykanka,” ayay hadalkeeda sii raacisay Ortagus.